Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Diso fanantenana tamin'ny fizarana vaovao ny fizahantany any India
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Raha ny Association Association of Tour Operations (IATO) Indiana dia mandray ny fampandrenesana momba ny famoahana ny fanondranana serivisy avy amin'ny Scheme India Scheme (SEIS) ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany amin'ny taom-piasana 2019-20, dia kivy ihany koa satria nahena izany hatramin'ny 5 isan-jato avy amin'ny 7 isan-jato.
IATO dia manentana ny governemanta hamerina amin'ny laoniny ny tombotsoan'ny SEIS tamin'ny taona lasa teo.
Nangatahana hampiakatra ny isan-jato ho 10, na izany aza, nahena 2 isan-jato kosa.
Ny fihenan'ny isan-jato hatramin'ny 5% dia hisy fiatraikany amin'ireo mpandraharaha mpizahatany kely sy salantsalany, ary manakana ny Rs. Crore 5 dia hisy fiatraikany ratsy amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany lehibe.
"Ny iray taona sy tapany lasa izay dia iray amin'ireo dingana ratsy indrindra ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany, ary raha jerena ny fahasahiranana miharitra dia namporisihina ny governemanta hamerina ny tombotsoan'ny SEIS ka hatramin'ny 7 isan-jato araka ny karama iray taona talohan'izay », Hoy izy IATO Filoha Rajiv Mehra.
Nandritra izay 18 volana lasa izay, ireo mpandraharaha mpizahatany anaty dia saika nahazo vola zilch niaraka tamin'ny maro tamin'izy ireo nanangona ny orinasany. Manoloana izany dia nandrasana nandritra ny fotoana ela ny tombotsoan'ny SEIS, satria io dia hanome fanampiana ara-bola vitsivitsy izay hanampy ny sehatry ny fizahantany hiatrika an'io krizy corvavie COVID-19 io.
Nandritra ny fifanakalozan-kevitra dia nangatahana ny governemanta hampiakatra azy ho 10 isan-jato ho fepetra iray indray mandeha, na izany aza, ny fampidinana ny tombony ary ny famerana izany ho 5 crores dia mahakivy ary angatahina ny governemanta farafaharatsiny hampiakatra azy io ho 7 isan-jato ary esory ny fanakanana ny Rs. 5 crore farafaharatsiny ho an'ny indostrian'ny fizahantany sy fandraisam-bahiny.
"Manantena izahay fa handinika ny fangatahanay ny governemanta," hoy Andriamatoa Mehra.
Marihina fa ny fihenan'ny isan-jato hatramin'ny 5% dia hisy fiantraikany amin'ireo mpandraharaha mpizahatany kely sy salantsalany, ary manakana ny Rs. Crore 5 dia hisy fiatraikany ratsy amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany lehibe.
Ny fizahantany dia nandray anjara betsaka tamin'ny tahirim-bolam-panjakana ary efa mpampiasa lehibe koa. Amin'ny toe-javatra mampahonena toy izao dia mitady fanampiana avy amin'ny governemanta ny sehatry ny fizahan-tany mba hahavelomana sy hamelomana azy ireo.
Manondrana ny serivisy avy amin'ny India Scheme (SEIS) dia mikendry ny hampiroborobo ny fanondranana serivisy avy any India amin'ny alàlan'ny fanomezana trosa scrip adidy amin'ny fanondranana azo ekena. Eo ambanin'io tetik'asa io, ireo mpamatsy tolotra, any India, dia hahazo valisoa amin'ny skotra SEIS, amin'ny fanondranana serivisy azo ekena avy any India. Amin'ity lahatsoratra ity dia mijery amin'ny antsipirihany ny momba ny fanondranana serivisy avy any India Scheme izahay.